Tijaabo adag oo hortaalla Ra’iisulwasaaraha Canada | Saxil News Network
Tijaabo adag oo hortaalla Ra’iisulwasaaraha Canada
Image captionRa’iisulwasaaraha Canada Justin Trudeau
Sannadkan 2017-ka, ra’iisulwasaaraha Canada wuxuu bartay cashar rasmi ah, kaasi oo ah awoodda baraha bulshada iyo saameyntooda.
Xisbiyada mucaaradka ayaa bilaabay in ay Ra’isulwasaaraha ku eedeeyaan in fariintiisa ay dadka ku dhiirigalisay in ay si sharci darro ah kusoo galaan Canada.
Image captionWasiirka maaliyadda ee Canada Bill Morneau
Arrimaha kale ee madax xannuunka leh ee Ra’isulwasaaraha horyaalla sannadkan 2018-ka waxaa ka mid ah arrimo la xiriira anshax dhaqameedka, kadib markii guddi ka shaqeeya anshaxa uu Ra’isulwasaaraha ku helay in uu xad gudub sameeyay kadib fasax dalxiis ah oo uu ku tagay jasiirad uu leeyahay nin saaxiibkii ah.
Sida lagu sheegay ra’yi aruurin uu sameeyay machadka Angus Reid ayaa lagu sheegay in markii ugu horeysay taareegada loo hayo Trudaue ay hoos uga dhacday boqolkiiba 50%.
Ra’iisulwasaaraha Canada: “Waan bahdilnay dadka asalka u daganaa dalka”
Lahaanshaha sawirkaPOOL/GETTY IMAGES
Image captionMadaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa billaabay wadahadallo cusub oo Nafta ah sannadkan 2017ka
Guddoomiyaha rugta ganacsiga ee Canada Perrin Beatty ayaa yiri “Wadahadala NAFTA waxay ku xiranyihiin sida uu ku fikiro qofka fadhiya Aqalka Cad, subax inta iska soo koco ayuu samayn karaa waxa uu doono”.
NAFTA , waa heshiis ganacsi xor ah oo u dhaxeeya saddexda dal, hase yeeshee tan iyo intii uu yimid madaxweyne Donald Trump waxaa heshiiskaas lasoo gudboonaaday caqabado, Canada-na waxa ay ku qasbantahay in ay hadda raadsato dalal cusub oo ay heshiisyo ganacsi la gasho